AYA Go Travel Insurance - AYA SOMPO Insurance
Explore Myanmar with AYA Go Travel
BUY AYA GO
AYA Go ခရီးသွားအာမခံ
AYA Go ခရီးသွားအာမခံဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကို စူးစမ်းရှာဖွေလိုက်ပါ။ သင်၏ခရီးစဉ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် မတော်တဆမှုများနှင့် မတော်တဆမှုများမှ ကာကွယ်ပေးသည့် အာမခံထားရှိခြင်းဖြင့် ပျော်ရွှင်သော ခရီးစဥ်တစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်ပါ။
အများဆုံး ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်အထိ အကာအကွယ်ပေးထားပါသည်။
ဆေးကုသစရိတ်၊ ဆေးရုံစရိတ်နှင့် အခြားကုန်ကျစရိတ်များ
၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် အထိ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုပေါ် မူတည်၍ ပေးလျော်ပါသည်။
အာမခံထားရှိသူ မတော်တဆသေဆုံးမှု ဖြစ်ခဲ့လျှင် အသက်ရှင်ကျန်ရှိသော ကလေးများ၏ ပညာရေးအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
AYA Go ခရီးသွားအာမခံကို အနည်းဆုံး (၁) ရက်မှ အများဆုံး (၃၁) ရက်ဆက်တိုက်ကာလအထိ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၁၄။ စစ်ပွဲ၊ ကျူးကျော်ခြင်း၊ တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းစစ်၊ ပုန်ကန်မှု၊ တော်လှန်ရေး၊ ဆန္ဒပြမှု၊ အဓိကရုဏ်း၊ သပိတ်မှောက်မှုများ
သင့်ခရီးစဥ်သည် သင့်အိမ်မှကီလိုမီတာ (၅၀) ထက်ကျော်လွန်ပါက အကာအကွယ်ပေးမည့် အာမခံအမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။
သင်၏နေအိမ် သို့မဟုတ် အာမခံဝယ်ယူရာတွင် ထည့်သွင်းထားသည့် စတင်မည့် နေရာမှ စတင်ထွက်ခွာသည့်အချိန်မှစ၍ (သတ်မှတ်ထားသည့် ထွက်ခွာချိန်မတိုင်မီ ၂၄ နာရီထက် စော၍ဖြစ်စေ၊ ​ခရီးရောက်ရှိမည့်နေရာသို့ ၂၄ နာရီထက်နောက်ကျ၍ဖြစ်စေ အကာအကွယ် အကျုံးမဝင်ပါ) သတ်မှတ်ထားသော ဆိုက်ရောက်ရာနေရာသို့ ရောက်ရှိသည့်အချိန်အထိ အကျုံးဝင်ပါသည်။
လုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်များ/ လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
ကလေးပညာရေးထောက်ပံ့ငွေ လျော်ကြေးလျှောက်လွှာပုံစံ / သေဆုံးကြောင်းသက်သေ စသည်တို့ လိုအပ်ပါသည်။
သတိထားသင့်တဲ့ အဓိက အချက်အလက်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ။
အာမခံထားသူ၏ အလုပ်အကိုင်၊ စီးပွား​ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် မသက်ဆိုင်သော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အာမခံဝယ်ယူမည်ဆိုပါက Proposal Form (အဆိုပြုလွှာ) တွင် မှန်ကန်သော အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ အာမခံထားသူသည် မေးခွန်းများကို မှန်ကန်စွာနှင့် တိကျစွာ ဖြေပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ မေးခွန်းများအား မှန်ကန်စွာ ဖြေဆိုခြင်းမရှိပါက အာမခံပေါ်လစီအား ငြင်းပယ်ခြင်း၊ လျော်ကြေးငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် အာမခံပေါ်လစီဖျက်သိမ်းခြင်းများအား ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အာမခံထားသူဘက်မှ ကုမ္ပဏီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ အန္တရာယ်ကို လက်ခံနိုင်သည့် အတိုင်းအတာနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို သိရှိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အာမခံထားသူသည် အသက်အာမခံထားရှိခြင်း၊ Proposal Form ပါအချက်အလက်များ ပြောင်းလဲခြင်းများ (သို့) အသက်အာမခံထားရှိသူသည် ခရီးသွားအာမခံထားမည်ဆိုပါက ကုမ္ပဏီကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
ခရီးသွားအာမခံအကြောင်းကို ထပ်သိချင်ရင် ဘယ်လိုစုံစမ်းနိုင်မလဲ။
AYA SOMPO အာမခံ၏ Customer Service Hotline ၀၉ ၇၇၇ ၁၀၀ ၅၅၅ သို့ တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့ နံနက် ၉:၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၀၀ နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
When choosing AYA Go Travel Insurance, it is helpful to remember that all plans-Standard Plan, Small Ticket Size Plan,Individual Plan and Family Plan. Compare these plans to find the coverage that is the best fit for your needs and financial situation.
Consideringaproblem withinatrip that may occur, AYA Go Travel Insurance policy can come in handy to make the claim process smoother. Fast and reliable claims give youasense of calm to focus on your recovery.